မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များ
မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များ APK ကို
သင့်ရဲ့ Android device ကိုစကင်ဖတ်က hidden features တွေ, အချက်အလက်, codes တွေကိုနှင့် Hack သော့ဖွင့်, သငျသညျရှေ့တျော၌မသိခဲ့ပါ။
အခုတော့သူအပေါငျးတို့ codes တွေကိုမှတ်မိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပါပဲ။ မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များနှင့်အတူသင်တဦးတည်းလက်ချောင်းကိုထိပုတ်ပါနှင့်တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုစီရင်နိုင်သည်!
အရိုးရှင်းဆုံးတိုက်ရိုက် dialer app ထဲမှာသူတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုအသာပုတ်အလွယ်တကူအားလုံးမိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်မီနူး, ဝှက်ထားသော codes တွေကိုသို့မဟုတ် menu ကို access! ဝှက်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ပျော်မွေ့! နှင့်ပျော်စရာရှိသည်!
ဤသည်က App အားလုံး country.Example အားလုံးမိုဘိုင်းအော်ပရေတာများအတွက် USSD ကုဒ်များထွက်ရှာတွေ့မှကူညီပေးပါမည်:
-field mode ကို, ယေဘုယျစမ်းသပ် mode ကို, ရဲ့ IMEI number, ခေါ်ဆိုမှု forwarding ကို, ကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုအလယ်ဗဟိုစစျဆေး, ခေါ်ဆိုမှုစောင့်ဆိုင်းအမြန်စမ်းသပ် menu ကို, ကိုသက်ဝင်
မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များနှင့်အတူအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ device ကိုအချက်အလက်များရယူပါ:
- Operating system သတင်းအချက်အလက် (လွှတ်ပေးရန်, လက်ချောင်းပုံနှိပ်, Id တည်ဆောက် ... စသည်တို့ကိုတည်ဆောက်။ );
- မျက်နှာပြင်သတင်းအချက်အလက် (အမြင့် pixels, width ကို pixels ကို);
- drawable သတင်းအချက်အလက် (icon ကိုမူရင်းအမြင့်နှင့်အကျယ်)
- စက်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ထုတ်လုပ်သူ, မော်ဒယ် ... စသည်တို့။ )
- Density သတင်းအချက်အလက်များ
တုန်ခါမှု, ဖလက်ရှမီး, အာရုံခံ, ဘက်ထရီ, Bluetooth ကြိုးမဲ့, Brightness ကို။
မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များ: သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာရှိသမျှလျှို့ဝှက်ချက် codes တွေကို (Hidden Menu ကို) စာရင်းပြုစုပါ။
firmware: သင်၏ဖုန်းနှင့်အခြားမိုဘိုင်းမော်ဒယ်, စတော့ရှယ်ယာ firmware ကိုရဲ့ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းများအတွက် Browse ။
ရရှိနိုင်ထုတ်လုပ်သူ: Samsung က, Sony, Oppo, HTC, LG, Motorola, Nokia က Apple သည်နှင့်အခြား
- ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်အမှတ်တံဆိပ်
- Knox အာမခံစာအုပျ
- အရောင် / internal storage
CSC INFO ▪:
- ကုန်ပစ္စည်း Code ကို
- မူရင်း CSC Code ကို
- Firmware ရဲ့ CSC Code ကို
- Active ကို CSC Code ကို
- Avalables CSC ကုဒ်များ
- CSC နိုင်ငံ
- Bootloader ဗားရှင်း
- PDA ဗားရှင်း
- CSC ဗားရှင်း
- baseband ဗားရှင်း
- နောက်ဆုံး Firmware
- Kernel ဗားရှင်း / ဗိသုကာ (32 / 64-bit)
- Java Virtual Machine (Dalvik သို့မဟုတ်အေအာရ်တီ)
▪ OS ကို INFO:
- Root သက်တော်
- Build အရေအတွက်
- Build လက်ဗွေ
- Build ဖျေါပွခကျြ
- Build နေ့စွဲ
- ဟာ့ဒ်ဝဲ / ဘုတ်အဖွဲ့ (CPU ကို 32 / 64-bit)
- ပလက်ဖောင်း / Chip
- GPU ကို (ဂရစ်ဖစ်ထုတ်ယူခြင်းယူနစ်)
- Modem ဘုတ်အဖွဲ့
- စုစုပေါင်း RAM ကို
- မျက်နှာပြင် (လက်မအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစား, pixels ကိုအတွက် Resolution, dpi နှင့် ppi အတွက်သိပ်သည်းဆ)
- ဘက်ထရီ (နည်းပညာ, mAh ဘက်ထရီ, ကျန်းမာရေးအတွက်စွမ်းရည်)
▪ DEVICE ကိုအိုင်ဒီ:
- ရဲ့ IMEI
- အန်းဒရွိုက် Serial Number
- Samsung ကနံပါတ်စဉ်
- နားကြပ် Connect ကိုကောင်တာ
- အားသွင်းကိရိယာ Connect ကိုကောင်တာ (အမြစ်လိုအပ်)
- S Pen ပါ detach ကောင်တာ (သာ Galaxy Note စီးရီးများအတွက်အမြစ်မလိုအပ်,)
- CPU ကို / ဘက်ထရီ / Ambient အပူချိန်
- CPU ကို / သိုလှောင်သုံးစွဲမှု
- ဘက်ထရီဗို့ / အဆင့်
- Signal တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
ဒီနေ့ရဲ့ software ကို developer များအကြားအသုံးအများဆုံးအလေ့အကျင့်တစ်ခုမှာ Operating System ကိုအတွင်း "backdoors" ၏အချို့သောမျိုးကိုစွန့်ခွာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ "backdoors" မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လုံလောက်သောအသိပညာနှင့်အတူမည်သည့်အသုံးပြုသူများသည်ကိုသင်ပုံမှန်အသုံးပြုသူများထံမှမျှော်လင့်ထားချင်ပါတယ်ထက်အများကြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းအဆင့်မှာစနစ်ကျသို့အရခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ကတခြားပုံမှန်အတိုင်းသုံးစွဲနိုင်သည် Modes ပိတ်ဆို့ပြီတဲ့အခါမှာပရိုဂရမ်မာ troubleshooting အတွက်စနစ်ကျသို့အရခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းဒီ backdoors အမြဲ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်။ သင်လုပ်နေလုပ်နေအရာကိုသိလျှင် developer များဖို့, သူတို့အတော်လေးရင်းနှီးဖော်ရွေခြင်းနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတွင်ဤသွင်းပြီး "လျှို့ဝှက်ချက် codes တွေကို" ဟုခေါ်ကြသည်။
အရေးကြီး! တချို့ကထုတ်လုပ်သူကဤ codes တွေကိုအသုံးပြုခြင်းခွင့်မပြုပါဘူးသူတို့သင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လျှို့ဝှက်ကုဒ်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ device ကိုအချို့ parameters တွေကိုမွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာသုံးပါ!
Tags: မိုဘိုင်း USSD Code, မိုဘိုင်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်များ, မိုဘိုင်းက Hidden ကုဒ်များနှင့် Tricks, ကွန်ယက်လျှို့ဝှက်ကုဒ်, ဝှက်ထားသော menus တွေ, လျှို့ဝှက် menus တွေ။
အချို့သော bug ကို
5.07 ကို MB